Amin’izao fotoana izao chat room dia tsy ampiasain’ny tanora, olon-dehibe ny lehilahy sy ny vehivavy loatra faly mipetraka any, ary mianatra, mifandray, hahita ny fitiavanao. Noho izany, ny voalohany dia ny firesahana amin’ny filaharana izay tokony hampifantoka ny saina — fandriana. Ny famolavolana dia tena mahafinaritra, dia azo atao ny mamorona ny mombamomba azy, ary mahita ny mombamomba ny namana, ary angamba ny mpivady, noho ny fanambadiana, ohatra, na fotsiny ny fifandraisana matotra.
Nandeha mialoha — tsy mitonona anarana chat Mampiaraka Mampiaraka. Avy amin’ny pejy an-trano, ianao dia afaka miditra amin’ny alalan’ny an-tsaha ny anaram-bositra, mifidy ny toe-po, lahy sy ny vavy sy ny taona. Ireto ambany ireto ianao dia jereo ny soratra hoe:»toy izany koa ny toe-po»sy»Avy ny faritra». Ataovy eo anoloan’ny azy ireo mifidy, raha tianao, ary tsindrio»Manomboka ny fifandraisana».
Ary ny iray hafa mahaliana chat -«an-trano chat». Na dia tsy dia be ny firesahana amin’ny, toy ny firesahana amin’ny lisitra izay afaka mifidy rehetra sy ny hiresaka am-pifaliana. Ankoatra izany, ianao dia afaka mamorona eto ny karajia sy ampanjifaina ny endri-javatra ao amin’ny hany fisainana mazava.
Aza adino fa misy ny finday amin’ny chat izay afaka hiresaka amin’ny alalan’ny SMS na ny finday Aterineto.
Noho izany, raha toa fotsiny te-chat, aza misalasala mba handeha ny iray amin’ireo chats ary, raha ny marina, dia mifandray. Na izany aza, ny fitiavana an-tserasera dia tsara ny mijery ny momba izany toerana, toy ny»virtoaly ny Fiarahana». Eto dia afaka mahita ny fanahy vadiny tao anatin’ny fotoana fohy somary, satria tsy manana hanomboka amin’ny rangotra, ratra kely.
Ny olona, izay mombamomba izahay, dia ho anareo hisafidy, hanana be dia be iraisana
Nahita zavatra toy izany, ianao dia hahita mora kokoa ny manomboka ny resaka, ary avy eo mba hahitana raha toa ianao manokana io ny olona mba hanorina fianakaviana na tsia.
Noho izany, manao safidy isika ary hanao ny tsara indrindra mba hanamora izany
Hitady sy mifankatia, miaraka amin’ny»chat»
Raiki-pitia tamin'ny vehivavy manambady - izany No fanantenana →